Fanontaniana napetraka matetika - Popular Jewelry
Manamboatra firavaka vita ho azy ve ianao?
Eny, manao izany isika. Mampiasa fitaovana avo lenta izahay. Niara-niasa tamin'ny mpanjifanay izahay hamolavola sy hanamboarana sanganasa namboarina manokana nandritra ny 30 taona.
Mitadiava bebe kokoa momba ny firavaka vita amin'ny malaza indrindra amin'ny Popular.
Ahoana ny fomba hilazako ny fandefasana grills na nify volamena?
Vonona ho amin'ny lafiny sasany? Ao amin'ny NYC Azonao atao ny mitsidika ny pejinay fitokanana mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny fananana grills namboarina:
Fantaro bebe kokoa momba ny grills namboarina ho an'ny baiko mahazatra Popular Jewelry.
Inona ny habeny?
Raha te hahalala ny fomba mety hahatratrarana ny firavaka, dia azonao atao ny mijery ny fitarihana sivana ireto amin'ny firavaka isan-karazany:
Fehin-tànana - Torolàlana ho an'ny akanjo fanaovana akanjo lava (& Anklets koa!)
Zavamaniry - Misafidiana ny mety tsara indrindra ho anao
Mpangataka - Misafidy singa mety tsara amin'ny rojoo
Rings - Misafidiana ny valin'ny peratra mety
Manaiky carte de crédit ve ianareo?
Eny, manaiky ny carte de crédit lehibe rehetra isika anisan'izany ny Visa, MasterCard, American Express ary Discover. Ankoatr'izay dia manaiky ny Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, PayPal ary na i Bitcoin aza. Ary raha toa ka manontany tena ihany ianareo, dia manaiky ihany koa ny vola mavesatra be sy mangatsiaka. (Azafady azafady alefaso aminay fotsiny izany.)
Inona avy amin'ny safidy hafa fandoavam-bola anananao?
Manaiky karazana fomba fandoavam-bola hafa toy ny PayPal Checkout izahay, izay hahafahanao mandoa ny kaontinao amin'ny fivarotana an-tserasera sy amin'ny magazay ara-batana. Ho fanampin'izany, izahay dia manaiky ny fandoavam-bola amin'ny finday NFC (Near Field Communication) toa ny Apple Pay, Android Play ary Samsung Play. Manolotra ny mpanjifantsika ihany koa izahay safidy handoa amin'ny karatra marobe na fomba fampifangaroana fomba fandoavam-bola amin'ny fividianana ao amin'ny magazay. Manaiky ny tariby amin'ny banky ihany koa izahay, ny cashier / ny fanamarinana voamarina ary ny vola. Ireo fotoana fanodinana vola fanampiny dia mihatra amin'ireo fomba fandoavambola ireo. Ankoatr'izay, ny fandoavam-bola dia tsy maintsy esorina alohan'ny famoahana ny entana na alefa amin'ny mpanjifa.
Manolotra drafi-pody ve ianao?
Eny, manao izany isika. Ny drafitra layaway malefaka azonay dia isan-kerinandro manomboka amin'ny fandoavam-bola isam-bolana ary manana fe-potoana 90 andro mahazatra. Raha mila fe-potoana namboarina namboarina ianao, azafady Mifandraisa aminay.
Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy fomba hamoronana drafitra layaway ho azy amin'ny alàlan'ny tranokalanay. Mila manatona anay amin'ny alàlan'ny E-mail (info@popular.jewelry) na omeo anay a antsoy amin'ny +1 (212) 941-7942
Manome famatsiam-bola ve ianao?
Affirmative! (pun intended) Mino izahay fa tsy voatery ho voasariky ny firavaka. Miaraka amin'ny sandan'ny volamena tsy mitsaha-mitombo hatrany, dia mitady fomba foana hahalalantsika ny rehetra ny firavantsika tsara. Ankoatry ny drafitra laika mety ho azontsika mora, dia mamatsy vola ny fividianana an-tserasera manamafy ary Paypal Credit, ary Zip (Quadpay teo aloha). Raha vantany vao nankatoavina ianao ho an'ny trosa, azonao atao ny manamarina amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera toa ny mahazatra anao ary haseho anao ny safidy momba ny famatsiam-bola.
Rahoviana no ho tonga ny baiko?
Amin'ny maha orinasa miorina am-pireharehana sy miorina any New York, fantatray fa ny mpanjifanay dia tsy afaka manokana fotoana be dia be avy amin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo hipetraka ao amin'ny magazay. Mandritra izany fotoana izany dia fantatsika fa ho tian'izy ireo ny fanamorana ny fanaovana izany na aiza na aiza misy azy ireo, ary amin'ny fahitana tena ilaina indrindra. Izany no antony hiezahanay hanome ny fikirakirana filaminana haingana araka izay tratran'olombelona - amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny baiko izay misy vonona ny hitafy entana ao anaty tahiry dia halefa amin'ny andro fiasana iray ihany. Hahazo mailaka fanarahana fizarana ho azy ianao raha vantany vao voahodina sy vonona ny halefa ny kaontinao.
Ho an'ny antsipirihany misimisy kokoa momba ny fandefasana dia azonao jerena eto ny politikan'ny fandefasana anay.
Ahoana no fomba hikarakarako ny firavako?
Ny fividianana firavaka rehetra avy amin'ny Popular dia tonga amin'ny fanadiovana firavaka matihanina matihanina. Manoro hevitra izahay mba ho malemy fanahy amin'ny firavakao raha mety. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fampiasana rano mafana sy savony malefaka dia ho ampy hanadiovana ny firavakao.
Tsindrio eto raha mila torolàlana lalina kokoa momba ny fikolokoloana firavaka tena tsara.
Manamboatra firavaka ve ianao?
Eny, manao izany isika. Manolotra serivisy fanamboarana ny firavaka volamena sy volafotsy izahay. Mila mitondra ny sombin-javatra simba ao amin'ny magazinay fotsiny ianao ary hanao izay fara herinay izahay hanamboarana azy io haingana araka izay tratra. Noho ny habetsahan'ny asantsika, azafady mba mamela fotoana fiandrasana farafahakeliny 2-3 ora ho an'ny serivisy fanamboarana fanaingoana firavaka anio raha azo atao. Ny ora fahavitan'ny asa dia miankina amin'ny fisian'ny singa / ampahany, ny fahasarotan'ny asa ary ny habetsahan'ny asa efa milahatra.
Manamboatra famantaranandro ve ianao?
Eny, manao izany isika. Manolotra serivisy fanaraha-maso feno izahay avy amin'ny fiovan'ny bateria mahazatra hatramin'ny fikojakojana hetsika / fanamboarana mekanika. Aza misalasala mitondra ny famantaranandronao vidy be ho any amin'ny fivarotanay mba hisian'ny diagnostika sy ny sioa. Ho eo amin'ny tanana tsara.
Ho an'ny fividianana ara-batana amin'ny fivarotana ara-batana Politika fiverenana ao amin'ny magazay azo ampiharina izay voasoratra koa amin'ny fahazoana mividy:
Ny fifanakalozana ihany no mahazo alalana ary tsy maintsy atao ao anatin'ny 7 andro ny fividianana.
Ho an'ny fividianana amina fivarotana an-tserasera, dia misy ny politika miverina amin'ny Internet. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny politika miverina dia mba tsidiho azafady Politika fandefasana sy fiverenana page.